Apokalypsy 8 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
8 Rehefa novahany+ ny tombo-kase fahafito,+ dia nisy fanginana antsasak’adiny teo ho eo tany an-danitra. 2 Ary hitako ireo anjely fito+ nijoro teo anatrehan’Andriamanitra, ary nomena trompetra fito izy ireo. 3 Nisy anjely hafa iray koa tonga nijoro teo akaikin’ny alitara,+ sady nanana fitaovana volamena fandoroana emboka manitra. Nomena emboka manitra+ be dia be izy mba hatolony teo ambonin’ilay alitara volamena teo anoloan’ny seza fiandrianana, tamin’ny fotoana nandrenesana ny vavaky ny olona masina. 4 Dia niakatra avy teo an-tanan’ilay anjely ho eo anatrehan’Andriamanitra ny setroky ny emboka manitra mbamin’ny vavaky+ ny olona masina. 5 Noraisin’ilay anjely avy hatrany anefa ilay fitaovana fandoroana emboka manitra, ka nofenoiny afo+ avy teo amin’ny alitara. Ary natsipiny mafy tamin’ny tany ilay afo,+ dia nisy kotroka+ sy feo sy tselatra+ ary horohoron-tany.+ 6 Ary ny anjely fito izay nanana ny trompetra+ fito+ dia niomana hitsoka. 7 Ary nitsoka ny trompetrany ny voalohany, dia nisy havandra sy afo+ izay samy niharo ra, ary natsipy mafy tamin’ny tany ilay afo. Ary may+ ny ampahatelon’ny tany, ary may ny ampahatelon’ny hazo, ary may avokoa ny ahi-maitso+ rehetra. 8 Ary nitsoka ny trompetrany ny anjely faharoa, dia nisy toa tendrombohitra+ lehibe nirehitra afo natsipy mafy tany an-dranomasina.+ Dia lasa ra+ ny ampahatelon’ny ranomasina, 9 ary maty ny ampahatelon’ny zavamananaina* tao an-dranomasina,+ ary rendrika ny ampahatelon’ny sambo. 10 Ary nitsoka ny trompetrany ny anjely fahatelo, dia nisy kintana lehibe latsaka avy any an-danitra,+ dia kintana nirehitra tahaka ny jiro. Ary latsaka tamin’ny ampahatelon’ny renirano sy tamin’ny loharano+ izany. 11 Ary natao hoe Zavamaniry Mangidy ny anaran’ilay kintana. Ary nanjary nangidy ny ampahatelon’ny rano, ka maro ny olona matin’ny rano, satria natao nangidy+ izany. 12 Ary nitsoka ny trompetrany ny anjely fahefatra, dia voa ny ampahatelon’ny masoandro sy ny ampahatelon’ny volana ary ny ampahatelon’ny kintana, mba ho maizina+ ny ampahatelon’ireny ka tsy hahazo hazavana ny ampahatelon’ny+ andro, ary ho toy izany koa ny alina. 13 Ary nahita aho, ary nahare voromahery+ nanidina teny afovoan’ny lanitra,+ niantsoantso mafy hoe: “Loza, loza, loza+ ho an’izay monina eny ambonin’ny tany noho ny amin’ny feon’ny trompetra sisa efa hotsofin’ny anjely telo!”+